Wasiirka Caddaladda XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay ku xigeenka Ergayga QM u qaalbilsan Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Caddaladda XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay ku xigeenka Ergayga QM u...
Wasiirka Caddaladda XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay ku xigeenka Ergayga QM u qaalbilsan Soomaaliya
Wasiirka caddaladaa Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya, mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku xigeenka ergayga gaar ah ee Qm u qaalbilsan arrimaha Soomaaliya, sidoo kalana ah isku duwaha arrimaha bini aadanimada Adam Abdelmoula.
Agaasimaha guud ee wasaarada Caddaaladda oo kulanka qayb ka ahaa ayaa wafdiga ka socday Qm uga warbixiyey howlaha Baaxada leh ee Wasaaradu u hayso Bulshada Soomaaliyeed
Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlay dardargalin iyo horumarinta hay’adaha Caddaaladda iyo Garsoorka u qaalbilsan dalka iyo sii la isaga kaashan lahaa taageerada lagu tayeynaayo dhamaan Hey’adahan.
Ku xigeenka Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Adam Abdelmoula, ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin sidii ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay ku bixiyaan horumarinta Hey’adaha Caddaaladda iyo Garsoorka.
Wasiirka Caddaladda Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa uga mahadceliyey Madaxda QM ee Soomaaliya sida ay u garab taagan yihiin Hey’adaha caddaaladda, isaga oo ka codsaday inay sii laba jibaaraan taageeradooda.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo xarigga ka jaray Warshad sameysa mishiinka neefta “SAWIRRO”
Next articleHeshiis ku saabsan hanaanka saami qeybsiga wax soo saarka dalka oo la ansixiyay